တရုတ်ဘက် လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကနေ အမေရိကန် တရားဝင်နှုတ်ထွက်ပြီဟု သမ္မတထရန့် ထုတ်ပြန် – Zartiman
တရုတ်ဘက် လိုက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ ကပ်ရောဂါ ရဲ့ကူးစက်နှုန်း ကို ကြိုတင် အသိမပေးခဲ့ဘူး စသည် နဲ့ ထရန့်က ဆက်တိုက် အပြစ်တင်ခဲ့ ပြီး ပြောင်းလည်းမှုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းပေမဲ့ မပြောင်းလည်းလို့ ထွက်ပါတယ်တဲ့။ အလှူငွေ အများဆုံးပေးနေ တဲ့ နိုင်ငံ နှုတ်ထွက်တာ မို့ WHO အနေ နဲ့ အတော် အထိနာပါတယ်။
လျှော့သွားတဲ့ရန်ပုံေ ငွကို ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေက အချိုးကျတိုးပေးကြဖို့ကလည်း အကုန်လုံးမွဲနေတဲ့ အချိန်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ တရုတ်ပြည် ကလည်း နှစ်နိုင်ငံစာ ရန်ပုံငွေ ထည့်ပေးမယ် မထင်။ WHO က နှုတ်ထွက်တော့ ကာကွယ်ဆေး ကို ခွဲတမ်းပေးဖို့ မလိုတော့ဘူး။ သူနဲ့ အ ဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံတွေ ကို လှူပေးမ ယ်။ သူလည်း ကျေးဇူးတင်ခံ ရမယ် ။
အရင်က WHO နာမည် နဲ့ လှူတယ် ။ သူ့ရန်သူနိုင်ငံတွေ လည်း ပေးတယ် ။ WHO နာမည် ရတယ် ။ အများ ဆုံးလှူ တဲ့နိုင်ငံ နာမည် မရဘူး ။စီးပွားရေးသမား ပီသပါ့။ အကျိုးမရှိတဲ့ အလုပ်မျိုး မလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ တရုတ်ဘက် လိုက်တဲ့ အဖွဲ့ WHO ကနေ တရားဝင် နှုတ် ထွက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထရန့်အစိုးရ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် ၊
ကာကွယ်ဆေးရရင် အလကား ဝေပ လိုက်မယ် WHO ကနေ တရုတ်ကို မပေးနိုင်ဘူးလို့ ထရန့်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ WHO ကနေ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စု နှုတ်ထွက်ကြောင်း ထရန့် အစိုးရ က တရားဝင် အသိပေး လိုက် ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကြိုတင် အကြောင်းကြား ရတာဖြစ် တယ် ။
နောက်နှစ် ဇူလိုင်လ ကစပြီး WHO နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘာမှ မ ဆိုင်တော့ပါဘူး ။ ထည့်ဝင်ငွေလည်း မပေးတော့ ပါဘူး ။
Good luck WHO. Now, big guy is left. You’re on your own.
Credit San Lin
တရုတျဘကျ လိုကျတဲ့ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ (WHO) ကနေ အမရေိကနျ တရားဝငျနှုတျထှကျပွီဟု သမ်မတထရနျ့ ထုတျပွနျ
တရုတျဘကျ လိုကျတဲ့ အဖှဲ့အစညျး၊ ကပျရောဂါ ရဲ့ကူးစကျနှုနျး ကို ကွိုတငျ အသိမပေးခဲ့ဘူး စသညျ နဲ့ ထရနျ့က ဆကျတိုကျ အပွဈတငျခဲ့ ပွီး ပွောငျးလညျးမှုလုပျဖို့ တိုကျတှနျးပမေဲ့ မပွောငျးလညျးလို့ ထှကျပါတယျတဲ့။ အလှူငှေ အမြားဆုံးပေးနေ တဲ့ နိုငျငံ နှုတျထှကျတာ မို့ WHO အနေ နဲ့ အတျော အထိနာပါတယျ။
လြှော့သှားတဲ့ရနျပုံေ ငှကို ကနျြတဲ့နိုငျငံတှကေ အခြိုးကတြိုးပေးကွဖို့ကလညျး အကုနျလုံးမှဲနတေဲ့ အခြိနျကွီး ဖွဈနတေယျ။ တရုတျပွညျ ကလညျး နှဈနိုငျငံစာ ရနျပုံငှေ ထညျ့ပေးမယျ မထငျ။ WHO က နှုတျထှကျတော့ ကာကှယျဆေး ကို ခှဲတမျးပေးဖို့ မလိုတော့ဘူး။ သူနဲ့ အ ဆငျပွတေဲ့နိုငျငံတှေ ကို လှူပေးမ ယျ။ သူလညျး ကြေးဇူးတငျခံ ရမယျ ။
အရငျက WHO နာမညျ နဲ့ လှူတယျ ။ သူ့ရနျသူနိုငျငံတှေ လညျး ပေးတယျ ။ WHO နာမညျ ရတယျ ။ အမြား ဆုံးလှူ တဲ့နိုငျငံ နာမညျ မရဘူး ။စီးပှားရေးသမား ပီသပါ့။ အကြိုးမရှိတဲ့ အလုပျမြိုး မလုပျဘူးပေါ့ဗြာ။ တရုတျဘကျ လိုကျတဲ့ အဖှဲ့ WHO ကနေ တရားဝငျ နှုတျ ထှကျပွီ ဖွဈကွောငျး ထရနျ့အစိုးရ ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ ၊
ကာကှယျဆေးရရငျ အလကား ဝပေ လိုကျမယျ WHO ကနေ တရုတျကို မပေးနိုငျဘူးလို့ ထရနျ့က ပွောလိုကျပါတယျ။ WHO ကနေ အမရေိ ကနျပွညျထောငျစု နှုတျထှကျကွောငျး ထရနျ့ အစိုးရ က တရားဝငျ အသိပေး လိုကျ ပါတယျ။ တဈနှဈကွိုတငျ အကွောငျးကွား ရတာဖွဈ တယျ ။
နောကျနှဈ ဇူလိုငျလ ကစပွီး WHO နဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု ဘာမှ မ ဆိုငျတော့ပါဘူး ။ ထညျ့ဝငျငှလေညျး မပေးတော့ ပါဘူး ။